Sarobidy ho an'ny Reefs | Reef Resilience
Tena zava-dehibe ny mifandray amin'ny mpandray anjara amin'ny antony mahatonga ny haran-dranomasina ho fiarovana ny tontolo iainana ary mila fiarovana sy fitantanana. Tsy ny harena voajanahary haran-dranomasina sy ny loharanon-kakazo voajanahary fotsiny no misy azy ireo, fa manome tolotra tsy hita isa ho an'ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka izy ireo. Raha harodana na rava ny vatohara dia hofongorana na horoahina ny serivisy omena azy, mety ho mandrakizay.
Ny vatoharan-dranomasina dia manome ny toerana tsy misy fotony sy ny zaridaina izay mila mitombo ny isan'ny trondro manan-danja ara-toekarena. Ny haran-dranomasina dia manampy amin'ny fiarovana ireo vondrom-piarahamonina amoron-dranomasina amin'ny fikorianan'ny tafio-drivotra sy ny fipoahana avy amin'ny onja, izay mety hampitombo avo roa heny amin'ny fiakaran'ny ranomasina. Ny vatoharan-dranomasina dia manome asa an-tapitrisany ho an'ireo mponina ao an-toerana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, ny fanjonoana, ary ny fialamboly. Ny vatoharan-dranomasina koa dia "Kabinetra fitsaboana" eto an-tany. Maro ny fanafody azo avy amin'ny haran-dranomasina, toy ny Ara-A sy AZT ary ny ARM-C. An'arivony amin'ireo zavatra hafa mahasoa ihany no mbola tsy tsikaritra, na izany aza, ny fahitana azy dia miankina amin'ny fiveloman'ny vatohara. Fanampin'izany, ny fiompiana haran-dranomasina dia toerana manan-danja amin'ny lova ara-kolontsaina any amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao, ary ny fomban-drazana ara-kolotsaina ho an'ny olona an-tapitrisany dia mifamatotra mafy amin'ny haran-dranomasina.
Zava-dehibe amin'ny Ecosystems Coral Reef
Ny fampahalalana hita ao amin'ireto tabilao etsy ambany ireto dia mety hilaina rehefa miresaka amin'ireo vondrona mpandray anjara samihafa mba hanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny haran-dranomasina ary hanosehana ny hetsika mba hiarovana ireo ecosystems.
Soatoavina sy serivisy
Miresaka momba ny fizahantany haran-dranomasina sy ny lanjan'izany amin'ny toekarenan'i Palau ny Palauans.
Farafaharatsiny, olona 500 tapitrisa no miankina amin'ny vatohara ho an'ny sakafo, fiarovana ny morontsiraka ary fivelomana. ref
Mihoatra ny 275 tapitrisa ny olona manerana izao tontolo izao manerana ny faritra manodidina ny haran-dranomasina (ao anatin'ny 30 km ny vatohara ary latsaky ny 10 km miala ny morontsiraka) ary manodidina ny 850 tapitrisa no mipetraka ao anatin'ny 100 km amin'ny haran-dranomasina. ref
Any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana, ny vatoharan-dranomasina dia manome ampahany amin'ny trondro iray amin'ny trondro iray manontolo, manome sakafo ho an'ny olona iray tapitrisa eo ho eo any Azia. ref
Ny vatoharan-dranomasina dia mametraka sakana voajanahary izay miaro ny kintana akaikin'ny ala mikitroka any an-dranomasina, izay miaro ny trano amoron-tsiraka, ny tany fambolena sy ny torapasika. Mihoatra ny 150,000 km amin'ny morontsiraka any amin'ny tany sy faritra 100 dia mandray fiarovana amin'ny vatohara. ref
Ny vatoharan-dranomasina dia ireo trondro ara-pahasalaman'ny taonjato 21, izay mihoatra ny antsasaky ny fikarohana momba ny zava-mahadomelina vaovao mifantoka amin'ny zavamaniry an-dranomasina. ref Ny vatoharan-dranomasina dia ampiasaina amin'ny fikarakarana ny homamiadana, VIH, aretim-panafem-pahaizana, fery, ary aretina hafa.
Ny vatoharan-dranomasina dia anisan'ny tontolo tranainy indrindra eto an-tany.
Ny vatoharan-dranomasina dia manohana ny fahasamihafan'ny karazan-javamaniry ary manome karazan-tsakafo tsy azo tsinontsinoavina sy fialofana ho an'ny karazan-trondro maro, anisan'izany ny trondro tanora. Ny tropikaly tropikaly dia milalao anjara mitovy amin'ny tany.
Ny vatoharan-dranomasina dia mihoatra ny ala noho ny fahasamihafany. ref
Na dia mandrakotra ny fambolena haran-dranomasina aza ny 1% amin'ny tany, dia trano ho an'ny 25% amin'ny karazan-trondro an-dranomasina rehetra. ref
Ny vatoharan-dranomasina dia manohana manodidina ny karazan-trondro 4000 sy karazam-biby 800. ref
Ny Corals dia ampahany manan-danja amin'ny vatohara; Ireo no karazam-borona izay manome ny rafitra haran-dranomasina. Ny Corals dia tena mora manimba ny asan'ny olombelona sy ny loza ateraky ny toetrandro.
Ny ankamaroan'ny firenena sy ny faritanin'ny vatohara dia firenena any amin'ny nosy kely, indrindra any Pasifika sy Karaiba. ref
Ny ecosystem natsangana dia manome tolotra maro izay mahasoa ny olona mivantana. Ho an'ny haran-dranomasina, ireo tolotra ara-tontolo iainana dia ahitana ny famokarana ny trondro, ny fiarovana ny moron-dranomasina, ary ny fahafahan'ny fizahan-tany sy ny fialam-boly. The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoValiny momba ny Ecosystem Millennium dia nanadihady ny fiantraikan'ny fiovan'ny tontolo iainana ho an'ny tombony ho an'ny olombelona, ​​ary namaritra ireo karazana sécurité momba ny tontolo iainana:
Fanomezana (ohatra, fisakaizana sy fanjonoana ara-barotra natao tamin'ny haran-dranomasina)
Fitsipika (fiarovana ny moron-dranomasina sy ny morontsiraka avy amin'ny tafiotra sy ny onja)
Kolontsaina (fizahan-tany sy fialam-boly)
Fanohanana (toeram-ponenana ao an-trano)
Sarim-panafahana an'i NOAA.
Ny lanjany ara-toekarena mifandraika amin'ny seraseram-pifandraisana dia azo avy amin'ny fomba maro, anisan'izany ny vidin'ny tombony amin'ny fanoloana tolotra manokana miaraka amin'ireo safidy hafa, toy ny fametrahana ranomafana hanoloana ny tontolo iainana amoron-dranomasina izay manome fiarovana ny moron-dranomasina fahiny. Ny ezaka atao handaminana ny soatoavina ara-toe-karena amin'ny natiora dia manambara fomba vaovao hitantanana ny tontolontsika mba hampiasana ny fampiasana maharitra sy ny fandrosoana maharitra. Ireto ambany ireto misy hevi-dehibe vitsivitsy momba ny soatoavina ara-toekarena amin'ny haran-dranomasina:
Tombanana fa ny haran-dranomasina dia manome $ 375 miliara isan-taona manerana izao tontolo izao amin'ny varotra sy ny serivisy. ref
Faritra farafaharatsiny sy faritany 94 dia mandray soa avy amin'ny fizahan-tany amin'ny akorabato. Ao amin'ny 23 amin'izy ireny, ny fizahantany amin'ny haran-dranomasin'ny hipoka dia mihoatra noho ny 15 isan-jaton'ny vokatra avy any an-toerana (GDP). ref
Ireo olona manerana izao tontolo izao dia mitsidika ny haran-dranomasina mba hankafy ny fialam-boly ataon'ireo vatoharan-dranomasina, anisan'izany ny fantson-drano SCUBA, snorkeling ary ny fiakaran'ny sambo. ref
Ao anatin'ny tatitra iray, ny tombon-tsoa iraisam-pirenena isan-taona amin'ny haran-dranomasina manerantany dia $ 29.8 miliara. Fizahantany sy fialam-boly dia $ 9.6 arivo tapitrisa amin'ity vola ity, fiarovana ny morontsiraka $ 9.0 miliara, fisarihana $ 5.7 miliara, ary ny biby isan-karazany amin'ny $ 5.5 miliara. ref
Ny saran-dàlana maneran-tany amin'ny fivalanana ho an'ny haran-koditra dia taranjaina amin'ny $ 20.0 miliara (singa manga mangatsiaka) ho $ 84.0 miliara (tranga marevaka mafy). ref
Ny fandraisana anjara amin'ny asa ho an'ny haran-dranomasina Great Barrier Health ho an'ny toekarena any Aostralia dia novinavina tamin'ny asa feno 53,800. ref
Ny sandam-pivoaran'ny tondra-drano isan-taona omen'ny haran-dranomasina amerikana dia mihoatra ny $ 1.805 arivo tapitrisa dolara amerikana. ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy tombony amin'ny fampihenana ny loza ateraky ny haran-dranomasina sy ny dongom-pasika any Karaiba Meksikana - Tatitra ara-teknikamanokatra fisie PDF